Tena fiovana… tsy fivadihana | NewsMada
Tena fiovana… tsy fivadihana
Resabe ny amin’ny fandanian’ny loholona ny volavolan-dalàna fanomezam-pahefana ny filohan’ny Repoblika hanao lalàna amin’ny alalan’ny famoahana didy hitsivolana. Misy ny manondro molotra ireo maro anisa mpanohana ny fitondrana teo aloha ho mivadika palitao, rehefa tsy manohitra izay aroson’ny hafa azy.
Efa zary fomba sy heverina ho mandeha ho azy ny fiandaniana amin’izay eo amin’ny fitondrana? Amin’izany, misy ny mahavaratra manamarin-tena ho izao, mandoka tena ho izatsy… Na ahoana na ahoana, tsy afaka amin’ny fijerin’ny ankamaroan’ny olom-pirenena ny amin’ny tsy fiovan’ny fomba fanaovana politika.
Tsy foto-kevitra sy fandaharanasa loatra no tena mitondra sy mibaiko amin’izany fa arakaraka ny toerana sy ny tombontsoa arovana na iadiana ihany? Hany ka sahirana sy voasoketa ho tsy mahay politika izay tsy manararaotra amin’ny fivadibadihana amin’ny fotoana sy ny toerana tokony hanaovana izay.
Anisan’ny mahasarotra ny fomba fanaovana politika eto io: tsy misy izay fiovana fa ny eo ihany no eo. Misy mihevi-tena ho tsy maintsy ao anaty fanjakana hatrany na iza na iza eo amin’ny fitondrana. Mahavalalanina sy mahafanina, toa ambinina sy mahomby hatrany amin’izany izy ireny: mahazo toerana, tombontsoa…
Na ahoana na ahoana koa, raha vao mivadika palitao indray mandeha ny mpilalao politika: ahina na azo antoka aza fa hivadibadika hatrany… Tsy foto-kevitra tsinona ny mitondra sy mibaiko fa olona. Nefa tsy hisy hijanona mandrakariva eo amin’ny fitondrana, afa-tsy ireo mpivadibadika lava manohana izay eo.
Tsy vitan’ny hoe tsy fiovan’ny fomba fanaovana politika sy fitantanana fa izay no anisan’ny manahirana ny fampivoarana ny fiainam-bahoaka? Amin’izao hoe dingana vaovao irosoan’ny firenena izao, tena hisy ve ny fiovana eo amin’ny mpilalao fa tsy mpanao politika ary fanovana eo amin’ny fomba fanaovana politika?
Na ahoana na ahoana, tsy misy ny hoe tonga namana vaovao mavomavo. Misy koa ny tonga mavomavo vao namana? Saro-toerana tsinona… Mba hisy amin’izay ny tena fiovana… tsy amin’ny fivadibadihana lava?